OUKITEL U18 Nyochaa, karia nani oyiri nke iPhone X | Gam akporosis
OUKITEL U18 Nyochaa
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Oukitel, Nyocha
Anyị na-ele anya ịnwale ekwentị a ma anyị mechara nata ya. Na gam akporo anyị enweela ike ịnwale OUKITEL U18 ọhụrụ maka ụbọchị ole na ole. Smartphone ahụ na-azọrọ ịbụ mbụ iPhone X sitere n'ike mmụọ nsọ zuru ihuenyo iji merie ahịa. Na eziokwu bụ na gị na ihuenyo anya dị ukwuu.
Ihuenyo nke bụ nnukwu nkwupụta ya na asọmpi ahụ. Formatdị ya na-eme ka a tụlee ya dị ka "mmepụta okike" nke ama iPhone X. Mana eziokwu bụ na OUKITEL U18 abụghị naanị nke ahụ. Na mgbakwunye na ezigbo ihuenyo doro anya sitere n'ike mmụọ nsọ site a elu nke nso. Ekwentị a na-enye anyị ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na ihe a niile na ọnụahịa nke naanị 154 $ ị nwere ike ịzụta site na ịpị ebe a.
1 OUKITEL U18 abụghị naanị "mmepụta oyiri" nke iPhone X
2 Ihe di n’igbe
3 Nhazi nke OUKITEL U18 otu n'ime ngwa agha ya
4 OUKITEL U18 gosipụtara nnukwu mkpesa ya
5 Ihe nhazi a maara nke ọma na-enye nsonaazụ ọma
5.1 Android 7.0 na oke pasent nke "ịdị ọcha"
6 OUKITEL U18 mpempe data
7 Foto ahụ nke OUKITEL U18 si n'aka Sony
7.1 Ngwa igwefoto zuru oke
8 Batrị OUKITEL U18 zuru oke?
9 Nche na-enweta obi ike
9.1 Usoro nkwalite ihu dị mma
10 Njedebe nke ọma na jack 3.5 mm?
11 Ihe kacha mma na nke kachasị mma nke OUKITEL U18
11.1 Nke kacha mma
11.2 Obere mma
12 Uche ederede
OUKITEL U18 abụghị naanị "mmepụta oyiri" nke iPhone X
O doro anya na ihe ọzọ kwụpụta izizi ekwentị a bụ Ọdịdị ya. Tozọ iji ogwe ihu na ngosipụta. A na-enwekwa ike ịmata oghere dị elu maka ọkà okwu na ihe mmetụta. Nke ahụ bụ ihe OUKITEL na-akwado mkpọsa mgbasa ozi ya kachasị mma. Bebụ ewere otu mmepụta okike nke isi ama ọ bụ nzere iji hụ. Ma o mewo nke ọma.
Na-ele anya dị ka Smartphone dị ike agha ihu abụọ. Ọ bụ ihe anyị kwurula na nyocha ndị ọzọ banyere smartphones "sitere n'ike mmụọ nsọ" site na ndị ọzọ dị elu. Ọ bụrụ na anyị jiri OUKITEL U18 a tụnyere iPhone X ọ gaghị apụta nke ọma. Mana ọbụlagodi na nke a mere, iji iPhone mee ka a mata onwe gị bụ atụmatụ na-arụ ọrụ.
Ma ọ bụghị naanị na ọ bụ Smartphone nke dị ka iPhone X. OUKITEL U18 nwere a igwefoto abuo nke Sony 16 Mpx + 5 Mpx meputara. Otu 4.000 mAh batrị nke ahụ na-ekwe nkwa nnwere onwe zuru ezu. Ma nke ahụ nwere ebe nchekwa 4GB Ram na ikike 64 Gb nchekwa dị n'ime.
Ejiri ya ngwa ngwa akara mkpisiaka. O nwekwara ọdịdị ihu usoro maka akpọchi. Njikọ maka ịkwụ ụgwọ na ịnyefe data USB Cdị C. Na a curved azụ na ihuenyo imecha nke ukwuu anya-akụta anya. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ihe karịrị ezughị ezu ọ bụghị nanị ịnọ na eziokwu na ọ bụ yiri iPhone X.
Ihe di n’igbe
Dị ka ọ dị na omenala niile anyị na-enweta, anyị na-achọ ime obere ngwa ahia. Gwa gi ihe anyi huru n’ime igbe a OUKITEL U18. Nhazi nke ekwentị ekwentị n'onwe ya, dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme, abụghị ọdịnala. Kama kpochapụwo igbe akụkụ anọ anyị nwere ikpe buru ibu na nke nwere akụkụ anọ, yana nke pere mpe.
Mana ka anyị banye n’ime, nke bụ ihe masịrị anyị. Dị ka ezi uche, na mgbada anyị na-ahụ ngwaọrụ n'onwe ya zuru oke na-agbakọta ma chekwaa ya na plastik nrapado. Na n'okpuru otu akụkọ ole na ole. Enweghị nke yikarịrị ka ndị nrụpụta na ndị ọrụ chere. Enweghị ekweisi ndien nnyịn isụk imaha oro.
Anyị nwere ihe ndị bụ isi. Na USB USB, na nke a na-agwụ Pịnye C, maka ebubo na ịnyefe data. Njikọ maka netwọk eletriki, nke dị na nke a bụ European, ihe ndị nrụpụta niile na-etinyebeghị. "Pin" imeghe oghere kaadi. Obere akwukwo nta Ntuziaka na ihe kwekọrọ ọmụma akwụkwọ ikike.
Ọzọkwa, anyị nwere nkwụnye iji jiri ekweisi anyị jikọọ na USB Type C connector. Ọzọ, ụlọ ọrụ ọzọ nke kpebiri ịme smartphone site na ịtụfu njikọ njikọ jack maka ekweisi. Anyị nwere ike iji ekweisi anyị, mana ọ bụghị na-enweghị obere eriri nkwụnye. Tastetọ agba, ma na Androidsis anyị ka na-amasị Jack njikọ.
Iji kwuo na OUKITEL bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka enweghị ekweisi na obere onyinye. Ihe bụ isi ma ọtụtụ ekele. Uwe aka silicone nke ahụ dabara na ekwentị ọhụrụ anyị. Na nke ahụ ga-echebe ya pụọ ​​na enwere ike bumps na ọkọ. A nkọwa na-amasị anyị, na na dabara nke ọma na-aghọwanye ndị nkịtị.
Nhazi nke OUKITEL U18 otu n'ime ngwa agha ya
Eziokwu bụ na ọdịdị ahụ ya, Na mgbakwunye na ichetara anyị iPhone X, ọ na-apụtakwa maka ihe ndị ọzọ. OUKITEL U18, na mgbakwunye na ịnwe ihuenyo dị egwu, nwekwara foto igwefoto abuo arụpụtara site Sony nke anyị ga-ekwu maka ya n'uju. Na azụ anyị na-ahụ igwefoto n'etiti ngwaọrụ, na akụkụ ya nke elu. N'akụkụ ya ugboro abụọ Ikanam flash. Y n’okpuru ihe akara aka mkpịsị aka gị mkpisiaka aka.
Ma ihe eji eme ulo anyị nwere ikwu na ọkwa ahụ dara n'ụzọ dị n'azụ. Na nke a anyị na-ahụ plastic. Ihe nke yiri ka echefuru ya. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na mmecha ya na-adọrọ adọrọ n’anya na obi ụtọ na aka. Tụkwasị na nke ahụ, na mpaghara igwefoto ahụ nwere ụdị obere ntinye nke na-enye ọhụụ ọhụrụ na nke dị iche na ndị ọzọ, ọtụtụ usoro.
"Njide" nke ihe ndị ahụ dị ezigbo mma. Na ekwentị na aka anyị enweghị mmetụta na ọ na-amị amị. Ihe ozo di nma banyere akwukwo a bu na Nzọụkwụ anyị agaghị emerụ ekwentị naanị site na imetụ ya aka. Plastic anaghị eji arụ ọrụ, mana ọ dị njọ? Ikekwe ndị mkpọrọ nke ụdị ejiji, ndị nrụpụta ndị ọzọ ahọrọla iko ma ọ bụ ọla. OUKITEL na-arụ ọrụ na plastik, nsonaazụ ya adịghị njọ ma ọlị. Anyị na-amasị.
Ọ bụ Smartphone na-ejide ya nke ọma dịka ọ dị ntakịrị. Ọ bụ ezie na na mbụ ọ na-enye echiche nke ịdịtụ arọ karịa nkịtị. N'ihi batrị 4000 mAh ya. Nhazi ya n'ozuzu ya nwere ezigbo ederede. Akụkụ dị n’ihu dị ezigbo mma na azụ bụ nke mbụ ma bụrụ nke ọma.
N'ime ya Aka nri anyị hụrụ mkpọchi bọtịnụ, na bọtịnụ elongated maka njikwa olu. Bọtịnụ nwere ezigbo njem, dị mfe iji pịa ọbụna uwe aka silicone. Anyị anwalela ụfọdụ smartphones nke nwere ihe mkpuchi mere ka isi ha sie ike, nke a abụghị ikpe.
El aka ekpe enweghị bọtịnụ. Anyị hụrụ naanị nke mbughari maka kaadi SIM na ebe nchekwa. N'akụkụ ya dị ala anyị na-ahụ oghere maka igwe okwu na n'akụkụ ya okwu, nke ọzọ abụghị stereo. Na etiti ahụ, OUKITEL U18 nwere nke ọtụtụ ndị nakweere, USBdị USB-C. Akụkụ nke elu bụ transperent kpamkpam. Achọla oghere maka ọnụ ụzọ mini jaak. OUKITEL kpebikwara na ya agaghị enwe ya, ihe anyị na-achọghị n’oge a.
Dị ka ịmata banyere ezigbo ekwentị niile, anyị chọrọ ikwu okwu banyere ihe ọtụtụ ndị nwere ike ịjụ anyị. Nke elu nke ihuenyo, nke anyị na-ahụ na "notch" ma ọ bụ oghere "U" adịghị ebipụ onyonyo, ọkwa ma ọ bụ ọdịnaya ọtụtụ ma ọlị. The software na-zuru okè kachasị nke mere na notma Ọkwa, foto ma ọ bụ vidiyo nwere ike anya ọma a obere ala. N'ụzọ dị otú a, ọ dịghị ihe a na-egbutu na ihe niile dị ka ihe zuru oke.
OUKITEL U18 gosipụtara nnukwu mkpesa ya
O doro anya na ihuenyo nke Smartphone a bụ isi "nko" ya. Ọ nwere ụdị na ụdị iphone iphone X ọfụma yana ịnya isi mbụ ihuenyo ekwentị sitere n'ike mmụọ nsọ nke XNUMX ncheta iPhone iji dịrị na ahịa. Ngosipụta ya dịkwa ezigbo mma na kọmpat, rụchara ngwaọrụ.
Anyị na-eche ihu ihu igwe ejiri mee nke ọma na ihuenyo 2.5D gbara iko IPS LCD na 5,85 nke anụ ọhịa ahụ. Ọ nwere mkpebi 720 x 1440 px, na a pụtara njupụta nke 275 pikselụ kwa inch. Na 21: 9 “ngosipụta zuru ezu” usoro iji nwee ọ contentụ na ihe ntanetị kachasị amasị gị na ihuenyo zuru.
El a na-agbanye ihu ihu na max n’akuku anọ ya. Naanị na akụkụ ala ya bụ obere akara ihu na-enweghị ihuenyo. N'adịghị ka ihe ọ dị ka ọ dị, ebughị ya n'obi maka bọtịnụ capacitive nke gam akporo. Ndị a dị n'ime ihuenyo n'onwe ya, mana ha zoro ezo mgbe anyị chọrọ ịhụ ihe na ihuenyo zuru oke.
The OUKITEL U18 na ya mpụtanakwa dị ka na elu na ala nwere okpokolo agba na-enweghị adị. Ihe ngosi na imewe ma obu "Notch" rụchaa n'elu. Ahụmịhe onye ọrụ ahụ dị ezigbo mma. Ọ dị mfe na anya, na-egosi nnọọ ezigbo agba mma na nkọwa. Ke ofụri ofụri, na ihuenyo bụ a nnukwu ihe ịga nke ọma, ihe na-eme ya a nnọọ "ụtọ" Smartphone.
Maka itinye "mana", iji rụọ ọrụ ákwà ngebichi ngosi ma ọ bụ ụzọ mkpirisi ị ga-agbanwe ụfọdụ omume. Ọ bụrụ na ị nwere àgwà nke swipe si n'elu rue alan'etiti ngwaọrụ ịlele amamọkwa ma ọ bụ ụzọ mkpirisi. Na OUKITEL U18 ị ga-eme ya n'otu akụkụ ebe ọ bụ na etiti, mgbe "ịmalite" ihuenyo n'ihu ala anaghị amata ngosipụta a.
Ihe nhazi a maara nke ọma na-enye nsonaazụ ọma
Dị ka ndị na-emepụta ya si kwuo, OUKITEL U18 bụ Ezubere maka ezigbo arụmọrụ. Na eziokwu bụ na arụ ọrụ ya enwechaghị nsogbu. Enweghị ọpụpụ, enweghị "kwụgidere" na enweghị mkpọka ma ọ bụ reboots na-atụghị anya ya. Anyị enweela ike ịnwale OUKITEL U18 site na ngwa ndị a na-ahụkarị na ihe niile arụ ọrụ nke ọma.
OUKITEL ekpebiela ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Notice hụrụ a oké ọrụ na-processor na ngwaike iwekota seamlessly. Mgbe anyi nyochara ya, anyi aghaghi ikwu na nsonaazụ ya kacha mma. Anyị nwere ike ikwenye na OUKITEL U18 nwere ike n'ihe niile anyị nwere ike ịrịọ site na Smartphone.
Anyị nwere MediaTek MT6750T, mgbawa octa-isi 1,5 GHz nke na-aza nnukwu na ngwaọrụ a. Daalụ n'ezie na-emesapụ aka ebe nchekwa ebuludika OUKITEL U18 kwadebere 4 GB. O nwere ebe nchekwa dị n’ime maka 64GB nchekwa. Ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke na-enye Smartphone a ike na ikike ruru eru maka ekwentị ndị kachasị ekewa.
Banyere GPU, OUKITEL U18 biara na kaadị ihe eji ama ama. Na Ogwe aka Mali T8620 MP2, dị ka anyị si nwee ike iji nyochaa, na-emesi obi ike nnukwu arụmọrụ. Ọ na-enyekwa nkwado zuru oke na nsonaazụ zuru ezu iji nweta ọtụtụ ihe na nnukwu ihuenyo gị.
Android 7.0 na oke pasent nke "ịdị ọcha"
Ọ bụrụ na anyị lelee ngwanrọ ahụ, na OUKITEL ha na-ahọrọ nke ọma Gam akporo na ihe fọrọ nke nta emebibeghị version. Na nke a anyị ka nwere ụdị ahụ 7 Nougat. Na ọbụlagodi na ọ bụghị ụdị zuru oke nke gam akporo. Anyị ga-ekwu na customization oyi akwa dị elu elu. Ọdịdị anya nke ụfọdụ akara ngosi ngwa dị n'ime ya anaghị agbanwe agbanwe.
Na nkenke, N'ime ihe ngosi a, anyị ga-ekwu okwu nke ọma banyere OUKITEL U18. Onye ozo ozo siri ike nwere nzere zuru ezu iji luso agha ihu na Smartphone ọ bụla n'ime ihe siri ike nke gam akporo.
OUKITEL U18 mpempe data
Usoro njikwa Android 7 Nougat
Ihuenyo 5.85 sentimita
Nhazi MediaTek MT6750T
GPU Ogwe aka Mali T8620 MP2
Ebe nchekwa RAM 4 GB
Nchekwa 64 GB
Rear igwefoto Abụọ 16 + 5 Mpx
Igwe n'ihu 13 MPx
Batrị 4.000 mAh
Akụkụ 150.5 mm x 732 mm x 10 mm
Ibu ibu 213 gr
Zụta ebe a OUKITEL U18 na nkwalite.
Foto ahụ nke OUKITEL U18 si n'aka Sony
OUKITEL, dị ka ọtụtụ ndị na-emepụta na mpaghara Eshia, na-ahọrọ ndị na-emepụta mpụga maka igwefoto ha. Ihe na - eweta oganihu na ngalaba foto. Ọbụna karịa mgbe a mere mkpebi iji họrọ maka ndị nrụpụta amaara ama na mpaghara a.
OUKITEL U18 nwere ihe mmetụta Sony IMX135 Exmor RS. Ihe mmetụta nke na-adịghị apụta ịbụ ihe ọhụrụ. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ kemgbe 2.014 ekpebiela inwe ya dị ka Samsung Galaxy Note 3. Maka nke a, ọ dị ka ọ nwere oge ochie maka Smartphone na-ahụ ọkụ na 2.018. Ọ bụkwa ihe a na-ahụta n’oge ụfọdụ.
Igwefoto foto esitela na nso nso a, na Sensọ nke OUKITEL ahọrọla maka U18 dị anyị ka ọ dị mma, ma ọ dịkarịa ala n'ihe gbasara ihe ọhụrụ. Anyị na-eche na ịhọrọ ihe mmetụta nke na-abụghị nke ọhụrụ ga-adị ọnụ ala. Ihe foto ndị a mere na-ekpughe.
Agbanyeghi na anwude onwe ha nabatara, shutter ọsọ na-elekwasị anya na ala ìhè ọnọdụ doo ukwuu na-chọrọ. Na foto a, nwere ọkụ dị ala ma jiri flash, anyị na-ahụ ka nkọwa nke isi ihe dị mma. Ọbụna iru ọkwa zuru oke.
Igwe ahụ n'azụ igwefoto dị na etiti nke ngwaọrụ, ma dọba ya anya m kwụ ọtọ otu n'elu nke ọzọ. A na-etinye flash n’aka nri. Ma ihe abụọ a kwụ na azụ n'ihi ntinye nke ọ nwere n'akụkụ nke elu.
Na mpempe akwụkwọ, kamera nwere ọnụ ọgụgụ "zuru oke" iji nye nsonaazụ ọma. Anyị nwere kamera azụ azụ abụọ yana mkpebi nke 16 Mpx gbakwunyere 5 Mpx. Ọ nwere oge onwe onye, ​​nchọpụta ihu, na agbapụ na-aga n'ihu. Ndabere elekere bụ akpaka, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịgbanwe ya site na ịpị na ihuenyo. Anyị nwere ike ịhọrọ geotag foto anyị, ma ọ bụ mee ya na HDR ma ọ bụ panoramic mode.
Na foto a wepụrụ n’èzí anyị hụrụ ụfọdụ nsogbu. Ikekwe ọkụ nke sitere n'okike abụghị nke kachasị mma ebe ụbọchị ahụ bụ igwe ojii. Anya gba ọtọ adịghị ka ọ dị njọ. Mana ozugbo anyị meghere foto ahụ anyị na-ahụ na ọbụlagodi na ihe ndị dị nso na igwefoto ahụ, a na-ahụta nkọcha site na enweghị ya.
Ngwa igwefoto zuru oke
OUKITEL U18 nwere a na-arụ ọrụ igwefoto arụ ọrụ. Site na mbido, naanị site na ịre igwefoto ka anyị nwere dị iche iche égbè ụdịdị. Site na foto nkịtị ma ọ bụ ndekọ vidiyo, na ụdị "eserese" dị iche iche na enweghị ntụpọ. Nwa na oji ma obu foto panoramic.
Ọbụna anyị nwere ọkachamara foto mode. Iji ya anyị nwere ike ịrụ ISO, nguzo ọcha ma ọ bụ ntọala njikwa oghere ụzọ. Ọtụtụ ohere iji nweta ọtụtụ igwefoto. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ohere iji ihe ọ bụla nzacha ahụ n'otu oge dị ka njide ahụ. Ihe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye na igwefoto ha na nke ahụ mara mma onye ọrụ.
Ihe nlebara anya nke igwefoto OUKITEL U18 nwere ike buru oke oke. Anyị ruru nkwubi okwu a mgbe anyị nwesịrị njide dị iche iche n'otu ebe ma nweta nsonazụ dị iche iche. Na n’agbata ise ma ọ bụ isii e chere na otu foto ahụ anyị chọpụtara nnukwu esemokwu n ’usoro elebara anya na nkọwapụta ya.
Na foto a, ọbụlagodi ime obere mbugharị dijitalụ, anyị nwere nkọwa dị mma nke agba na ụda. Na larịị nke na-elekwasị anya bụ kwesiri ngosi dị mma karịa na aga na otu.
Batrị OUKITEL U18 zuru oke?
Na nyocha kachasị ọhụrụ emere na smartphones ọhụrụ iji kụọ ahịa, anyị na-ahụ mgbanwe ụfọdụ. Ọ bụ eziokwu na batrị na-eto eto na ikike. Na nke nta nke nta ebumnuche bụ na enwere ikike ịnweta ikike. Nke bụ eziokwu bụ na nke a anaghị eme mgbe niile ọbụlagodi na nnukwu batrị.
Anyị na-ahụ dị ka ihe a na-ahụkarị na smartphones ọhụrụ na-ebuwanye ibu. Ihuenyo nke na-arịwanye elu nwere mkpebi dị elu na ike nchapụta. Ya mere, ya mere, ka ihe ngebichi na-eto, ogo oriri batrị na-abawanye.
N'ihi nke a, na ihu elu oriri ike ọ dị mkpa iji mejuputa ngwaọrụ nwere ụgwọ batrị kachasị elu. Yabụ, n'oge ole na ole anyị hụrụ na ekwentị ọhụụ jikwaa nnwere onwe. O siri ike inweta Smartphone nke na-ejikwa ijikọ ihuenyo buru ibu yana n'otu oge batrị ya na-adị ogologo oge.
Ezigbo njikarịcha na akara ngosi dị n’etiti ihe niile dị na ekwentị na-adịwanye mkpa.. Site na nhazi ahụ na ịdị ike nke ncha ihuenyo. OUKITEL U18 nwere batrị 4000 mAh. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu batrị, n'ihi ezigbo "tuning" nke ihe ndị dị na ya, ọ karịrị ezughị oke nke na mgbe ogologo ụbọchị gasịrị, ọ ga-enwe ike iru njedebe
Ezigbo ọrụ sitere n'aka OUKITEL, nweela ezigbo njedebe na nnwere onwe dị mma. Karịsịa na-enweghị ibu arọ, ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere smartphones nwere otu ikike. Ọzọkwa, na-enweghị oke ọkpụrụkpụ nke ngwaọrụ ahụ na-eto eto na-enweghị nchịkwa dịka anyị hụworị ihe mere ndị ọzọ.
Nche na-enweta obi ike
OUKITEL U18 nwere usoro nchekwa dị iche iche. N'ezie, ọ nwere ihe ndị bụ isi ụkpụrụ mkpọchi Android nwere. Ma gị nche na-emejuputa atumatu na akara mkpisiaka nke dị n’azụ. Ọ na-aza ngwa ngwa maka akpọchi ma nwee ike hazie ya na arụmọrụ dị iche iche.
Na mgbakwunye na usoro ndị a kpọtụrụ aha iji chịkwaa nchekwa, OUKITEL na-etu ọnụ na ya nwere U18 a usoro nchọpụta ihu dị elu. Ma eziokwu bụ na ịnwalela ihe ndị ọzọ hapụrụ ọtụtụ ihe ịchọrọ. Anyị nwere ike ịsị na "ihu Id" nke ọrụ OUKITEL U18. Anyị nwere ike ịmeghe ekwentị n'eji ihu anyị, naanị nke anyị.
Iji malite, nchọpụta ihu na-ewe obere oge karịa ịse foto dị mfe. Nke ahụ na-egosi na nke ahụ ihu ịgụ maka unkpọghe bụ pụtara ìhè nke ọma karị. Mgbe emechara ọtụtụ ule, ọ ga-ekwe omume kpọghee ekwentị ahụ na ihu edere ede iji mee ya. Anyị mechara nwee ike ịnwale ụfọdụ ngwanrọ nchọpụta ihu igwe dị egwu nke na-arụ ọrụ.
Usoro nkwalite ihu dị mma
Site cons, anyị ga-ekwukwa na anyị nwere nsogbu mgbe n'ọrụ akpọghe site nchọta ihu. Na ụkpụrụ, ọ dị anyị ka ọ bụ njehie enweghị ike ijikọ ya na onye na-agụ mkpịsị aka. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị ejiri ihu anyị họrọ mmeghe ahụ, onye na-agụ mkpịsị aka agaghị arụ ọrụ. Ihe nke doro anya na ọ dịghị ekwe omume. Anyị nwere ike ikpokọta onye na-agụ mkpịsị aka na usoro mmeghe, mana ọ bụghị na nchọpụta ihu.
Ọzọkwa, mgbe mkpịsị aka na-agụ akwụkwọ nwere nkwarụ, a na-ewepụ mkpịsị aka ahụ anyị dekọrọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya ọzọ anyị ga-edebanye aha ha ọzọ. Ọ bụ ihe ihere ịghara ikwu okwu nke ọma banyere sistemụ na-arụ ọrụ ebube maka ebumnuche na mpụga ya. Ma mgbe anyị nwesịrị ya ma hụ na ọ na-arụ ọrụ, anyị kpebiri maka onye na-agụ mkpịsị aka, ngwa ngwa na otu esi eji, ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị ịpị bọtịnụ "ụlọ" iji rụọ ọrụ igwefoto ahụ.
Enwere olile anya na obere nsogbu ndakọrịta a ga-edozi n'oge na-adịghị anya site na mmelite sistemụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ otu ihe kwụpụta na Smartphone n'onwe ya zuru oke. Ọ na-aghọ ihe nhụsianya na-adịghị mma.
Njedebe nke ọma na jack 3.5 mm?
Dị ka anyị kwuru na mbido, na OUKITEL U18, enweghi mmeputa nke obere Jack. Anyị ga-achọ ihe nkwụnye ọkụ nke na-abịa na igbe iji jikọọ ekweisi anyị. Ọzọ anyị ga-ebu obere ngwa ọzọ. Ma ọ bụ itinye ego na ekweisi Bluetooth, nke yiri ka ọ bụ ebe ha chọrọ iji anyị kpụ ọkụ.
Anyị maara nke ahụ na ahịa enwere ngwa ikuku na-ege ntị music na ezigbo mma ahịa. Mana onwere ndi na achoghi iju batrị ya site na "obere gadget" ọzọ. Anyị ka na-ajụ inye njikọ njikọ jaị 3.5mm. Mana ọ dị ka ọ bụ ebe a ka ndị nrụpụta ga - eduga anyị.
Banyere onye na-ekwu okwu na mpụga, n'ihi na ọ nwere naanị otu, anyị ga-ekwu na ọ naghị apụta maka ike ya. O nwere ezigbo ụda, ya na ezigbo nkọwa ya n’enweghị nghota. Ọ bụ ezie na ọkwa kachasị ya dara ntakịrị.
Anyị ahụla na ụfọdụ n'ime "elu" ọhụrụ dị elu ekpebiela ịkụ nzọ na ịkwadebe ngwaọrụ ha na ndị ọkà okwu stereo dị ike. Yabụ anyị nwere olile anya na ndị na-ekwu na ha dị mkpa ga-anabata omume a.
Ihe kacha mma na nke kachasị mma nke OUKITEL U18
Anyị ga-amalite site n'ikwu banyere imewe nke Smartphone a. N'ihe yiri oyiyi doro anya ọ nwere na iPhone X. Ọrụ ahụ mekwara na azụ, yana na okpokolo agba ya. Na mgbakwunye na njedebe curved na ihuenyo abụọ na mkpuchi azụ. Ha na-eme ka anyị nwee ihu ọnụ nke na-abanye site na anya ma mechaa nke ọma.
La ndụ batrịN'iburu n'uche mmezi nke ihe ngebichi nke ụdị caliber ahụ mepụtara, ọ kachasị mma. N'agbanyeghị na enwere batrị nke anyị anaghị atụle oke buru oke, arụmọrụ ya dị mma. Na ịghara ile chaja maka otu ụbọchị na ọkara dị ukwuu.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ọdịiche, nha nke OUKITEL U18 bu budata obere karịa ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ihuenyo karịa obere sentimita asatọ. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ọ pere mpe ma ọ dịkarịrị ogologo. Gụnyere ọbụna na-atụle na ihuenyo ya bụ sentimita 5,85.
El igwefoto elekwasị anya nwere ike mma. O yighị ka ọ kwụsiri ike ma ọ bụ na ọ na-eme otu ihe mgbe niile. Ikekwe enwere ike idozi ya site na nwelite nke ngwanrọ nke gị. Anyị anwalela otu igwefoto ahụ na otu ihe mmetụta ahụ na ọdụ ọzọ na nsonaazụ ya ka mma.
para rụọ ọrụ ngosi mmanya ma ọ bụ mmezi na nnweta nnweta anyị ga-adọkpụrụ mkpịsị aka ahụ site na elu ruo na ala site n'otu akụkụ ya. N'ime etiti, n'ihi ọkwa ahụ, anaghị amata mmegharị ahụ site na itinye mkpịsị aka gị elu na ala etiti ngwaọrụ ahụ. Ihe anyi ji. Ọ ga - abụ naanị ihe gbasara iji ya.
Anyị enweela ike ileba anya, mgbe ogologo oge nke vidiyo na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na ekwentị ekpo oke ọkụ. Ọ dịghị ihe na-emenye ụjọ, mana anyị enweela ike ịchọpụta obere mmụba na ọnọdụ okpomọkụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na-egosi, OUKITEL U18 na-egosi dịtụ arọ karịa ngwaọrụ ndị ọzọ. Dịka anyị kọwara, akụkụ buru ibu n'ihi ndụ batrị ya na-emesapụ aka.
Nyochaa: Rafa Rodriguez Ballesteros
Onye edemede: 60%
isi nke igwefoto foto
obere ikpo oke ọkụ n'oge ụfọdụ na-aga n'ihu
dị ntakịrị arọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » OUKITEL U18 Nyochaa
AKW FKWỌ AKW FKWỌ AKW FKWỌ AH F, NA Kachasị Ihe Niile bụ na ha ga-ege gị ntị na nkọwa ndị a ma bulie oge dị mma na-enweghị obi abụọ, ị maara? M ga-echere mara ma ọ bụrụ na ha gosipụtara na ha nwere ike inweta ya Achọrọ m ihe ị dere ka ị Chere, Ekele si na mpaghara TamaZUNCHALE, SLP MEXICO
Rafa Rodriguez Ballesteros dijo
Daalụ nke ukwuu maka ịgụ anyị, yana maka okwu gị. Eziokwu bụ na ọ bụ ọnụ na-amasị anyị ọtụtụ maka ọtụtụ ihe, agbanyeghị na enwere ike ịkwalite ya na ndị ọzọ. Mana ọ bụkwa eziokwu na ọ na-esiwanye ike ịchọta ọnụahịa zuru oke maka onye ọrụ ọ bụla. Nnukwu ekele dị na Mexico !!
Zaghachi Rafa Rodríguez Ballesteros
Mbata nke LG Q7 kwadoro maka Spain. Mara ego ya!
Samsung na-arụ ọrụ na smartwatch na Wear OS